Inona no tianao indrindra eo amin'ny E-scooter, marani-tsaina sy scooter E-skateboard? - Jomo Technology Co., Ltd
Bika Aman 'endrika , ny fijery azy no samy hafa, fa miantehitra amin'ny ankapobeny ny mizana ny olona mba hahazoana, momba ny fahaizana ilaina ny mahay mandanjalanja iray dingan'ny fianarana, tsy hisy ho mahay mitaingina izany satria teraka.
Electric scooter raha oharina amin'ny roa farany, dia mora kokoa ny mianatra sy ny fanaraha-maso toy ny weel ho azo antoka kokoa, noho ny tahony dia afaka mampihena ny haavon'ny mety hisian'ny nianjera, indrindra fa ny fahaizana, raha miantehitra amin'ny tari-dalana ny hahatakatra ny.
Novakiny , dia novakiny rehetra manana asa, fa ny fomba braking dia tsy mitovy, ny herinaratra scooter milina notapahiny dia novakiny teo amin'ny ankaviany tamin'ny tanan'ny no fanoitra iray ny bokotra novakiny, dia afaka ihany koa ny dingana ny kodiarana ao ivohonao manao, dia notapahiny matoantenin'ny atao.
Ny Smart scooter sy ny Electric Skateboard's novakiny dia miankina amin'ny ny mifanohitra mandanjalanja, raha ny inertia ny olona sy ny fiara, dia hanjavona amin'ny novakiny, na inona na inona no hafainganam-pandeha, ny freins azo mora fehezina, dia notapahiny mavitrika.
Speed , eo ambanin'ny toe-javatra ara-dalàna, ny hafainganam-pandeha ny herinaratra skateboard dia mafy, nihanika mahay tsara noho ny roa hafa. Normal hafainganam-pandeha dia 30km / h, hafainganam-pandeha ambony dia 40km / h, mandehana haingana
Koowheel Electric scooter L8, ny Max hafainganam-pandeha dia 25 Km / h raha mamela orinasa (The Max hafainganam-pandeha azo ahitsy ny 30KM / H thrugh APP toerana ny mpampiasa)
Ny hafainganam-pandehan'ny Max Smart mandanjalanja scooter K5 dia 15km / H.
Dia hita fa ny herinaratra môtô L8 sy Electric skateboard dia haingana kokoa noho ny manan-tsaina scooter ny hafainganam-pandeha. Afaka mitondra azy mandeha na aiza na aiza. Electric skateboard dia mahomby kokoa, mazava kokoa mandritra ny ora zozoro. Izy rehetra dia fitaovana tsara ho an'ny nivezivezy fohy.
Ambony lamaody sy mangatsiatsiaka fohy-diany fitaovana, izay no tianao indrindra?